2016 November - All Things Myanmar Burmese
Lwin Moe’s ripped off stories
ကိုလွင်မိုးရဲ့ပြဿနာအကြောင်း သိသမျှလေး ပြောပြရရင်(ဟာဂျူလီ-ကသာ) ************* ကိုလွင်မိုးရဲ့ အခုဖြစ်စဉ်ကိုသေခြာ မသိလို့ မဝေဖန်လိုပေမယ့် ကသာခရိုင်ဗန်းမောက်မြို့နယ်က ရွှေတောက ဒေသခံကတွေတော့ ကိုလွှင်မိုးကြောင့် အတော်ဘဝပျက်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒေသခံတွေ
Fashion with Phyo Ngwe Soe and Pearl Win
Breaking News: NLD’s Lawer U Ko Ni shot dead at Yangon International Airport
အထူး ၀မ်းနည်း ကြေကွဲခြင်း နေ့လယ် ၃း၁၅ နာရီ စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ (စင်္ကာပူ ထရန်စစ်) ရန်ကုန် ပြန်သွားတဲ့ … ဦးကိုနီ ရန်ကုန်လေဆိပ် တက်စီစတန်းမှာ
Thet Mon Myint + Nay Toe
Myanmar actress Thet Mon Myint and Myanmar actor Nay Toe in ချိုချစ်ခါး
Aung La & Wyne Su
@ Pa Laung Village credit to: cele cele small
STOP sexual Violence in Burma!
သက်ငယ် မဒိန်းမူတွေရပ် ❌🚫 “လိင်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး၊ ကြီးလေးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေး´´ ပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေး ကျေးဇူးတင်လွှာ…. ယခုပွဲလေး အောင်မြင်စွာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ မေတ္တာဖြင့် ကူညီပေးခဲ့ကြသော…. – ပွဲခင်းနေရာအား အခမဲ့ကူညီပေးသော ကန်တော်ကြီးပန်းခြံမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ – ပွဲတွင်ဟောပြာမျှဝေပေးပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ၊ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်၊ ရှေ့နေဒေါ်လှလှရီ (Legal Clinic Myanmar ) ၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုအား ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချကန့်ကွက် စကားများ ပြောကြားပေးပါသော အနုပညာရှင် ဆန်းထွဋ်၊ ထားထက်ထက်၊ စမိုင်းလ်၊ နိုင်းနိုင်း၊ Cobra နှင့် ကိုယ်တွေ့ခံစားချက်အား မျှဝေပေးပါသော မနန်းညီ – ပွဲသို့ လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးပါသော Future Music Child Band (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) – စတိတ်စင် အပြင်အဆင်နှင့် ပွဲခင်းတွင်း […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Myanmar/Burmese | No Comments »
Myanmar 1 –0Malaysia AFF Suzuki Cup 2016
Myanmar’s David Htan (L) fights for the ball members of Malaysia team during the AFF Suzuki Cup 2016 at Thuwunna Stadium, in Yangon, Myanmar. Myanmar won the match Malaysia with 1-0. Aung kyaw htet(YAT group) Photo credit to Paing Aung/YAT Group
You are currently browsing the All Things Myanmar Burmese weblog archives for November, 2016.